အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား – စာအုပ်မြို့တော်
by MM Book City · Published April 23, 2019 · Updated April 23, 2019
အိန္ဒိယ သမ္မတပြောသွားတဲ့ မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား
တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ
မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လည်း တိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတို့
အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။
ဒီစာကို ဖတ် ပြီးသွားရင် သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက် ငါတို့ဟာ
တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်တွေ ဆိုတာ သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။ တာဝန် သိစိတ်တွေ
ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယသမ္မတပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းထဲက လက်ရှိမြန်မာလူမျိုး အတော်များများရဲ့
စိတ်ဓါတ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ သဘောတူတယ် သဘောကျ တယ်
နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ကျန်တဲ့လူတွေ သိအောင်ရှဲပေးစေချင်ပါတယ်။ အခုလို ပြောထားပါတယ်။
” မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်ရမလား..?
“တို့အိန္ဒိယအစိုးရက လုပ်ဆောင်မှုတွေ မထိရောက်ဘူး မင်းပြောတယ်။ တို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေတွေကလဲ အိုဟောင်းပြီး ခေတ်မမီတော့ဘူး။
မင်းပြောတယ်… မီးရထားဆိုတာ ဟာသတစ်ခုပဲ..အဲလိုင်းတွေဆို ကမ္ဘာမှာ
အဆိုးဆုံး…စာပို့စနစ်မှာလဲ ဘယ်တော့မှ ပို့တဲ့စာက မရောက်ဘူး…တို့တိုင်းပြည်မှာ
အားလုံးက ခွေးစာကျွေးပစ်ရတော့မလောက် ပျက်စီးစုတ်ပြတ်မှုတွေချည်းပဲ လို့
မင်းပြောတယ်… မင်းပြော… မင်းအဲ့ဒါတွေချည်းပဲ ပါးစပ်ကနေပြောပြီး
ကျတော့…စင်ကာပူကလမ်းတွေပေါ် မင်းဆေးလိပ်လွှင့်မပစ်ရဲဘူး..စတိုးဆိုင်မှာ မုန့်မစားရဲဘူး..
ညနေ ၅ နာရီနဲ့ ၆ နာရီကြား အောခတ်လမ်းပေါ်ကားဖြတ်မောင်းဖို့ ၅ ဒေါ်လာ
မင်းပေးတယ်… အဲ့လိုစင်ကာပူမှာ မင်းတစ်ခုခုများပြောလား..ပြောခဲ့လား…?
မကာရ်မှာ ခေါင်းမဆောင်းပဲ မင်းအပြင်ထွက်ရဲလား.. ၀ါရှင်တန်မှာ တစ်နာရီ ၅၅ မိုင်ထက်ကျော်ပြီး မင်းကားမောင်းရဲလား… မောင်းမိလို့ ရဲလာဖမ်းရင်
ငါ့ကိုဘာမှတ်နေလဲ ငါဘာကောင်လဲ သိလား ငါဘယ်သူ့သားလဲ သိလားလို့ ရဲကို
မင်းပြောရဲလား…. အော်ဇီနဲ့ နယူးဇီလန်ကမ်းခြေတွေမှာ စားပြီးသား
အုန်းခွံတွေကို တွေ့ကရာ မင်းလျှောက်ပစ်ရဲလား….
အိန္ဒိယမြေကို စနင်းပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ထင်သလို ဆေးလိပ်တွေ စက္ကူစတွေ အမှိုက်လျှောက်ဖွတတ်တဲ့
ရပ်နိုင်ငံမှာကျတော့ ဘာလို့ ပုံစံအတူတူ မလုပ်နိုင်ရတာလ?
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ အငြိမ်းစား ဘုံဘေမြို့စည်ပင်အရေးပိုင်ကြီး Mr.Tinaikar ဘာပြောသွားလဲ သိလား?လူ့မလိုင်တွေက သူတို့ခွေးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီး
ပြီးတာ့ အဲ့လူတွေကပဲတစ်ခါပြန်ပြီး ညစ်ပေနေတဲ့ လူသွားလမ်းတွေအတွက် တာဝန်ရှိသူ အဖွဲ့အစည်းတွေညံ့ဖျင်းလှချည်ရဲ့ဆိုပြီး အပြစ်တင်တတ်ကြတယ်… တာဝန်ရှိသူတွေကို
အမေရိကားမှာ ကိုယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆီက ထွက်တဲ့ အညစ်အကြေးတွေသန့်စင်ပေးဖို့ ပိုင်ရှင်ကတာဝန်ယူရတယ်..ဂျပန်မှာလဲဒီလိုပဲဒီ အိန္ဒိယကလူတွေ
အဲ့လိုလုပ်လား..? တို့လူတွေကကျတော့ မဲပေးပွဲသွား။ မဲလေးပေးပြီး..ဖြစ်သမျှ
အကုန်ကို တာဝန်လွှဲချ ခေါင်းခံပေးဖို့ လူတစ်ယောက်ရွေးလိုက်သလိုပဲ။
မရှိသလိုနေပြီး အရာအားလုံးကို အစိုးရကပဲ ကကြီးခခွေးကအစ လိုက်ဖြေရှင်းပေးဖို့
ကိုယ်တိုင်ပါဝင်အားဖြည့်မှု သုည…. အမှိုက်လေးတွေ
ကြုံသလိုလျှောက်ပစ်ရင်း မြို့တော်သာယာလှပဖို့ အာဏာပိုင်တွေကို
ထိုင်စောင့်နေကြတယ်။ အဲဒီ့အစား အမြင်မတော်တဲ့ စက္ကူတစ်စကို
ကျကျနန ဘယ်လိုသုံးရမလဲတော့ အလေးမထားဘူး။
အိန္ဒိယအဲလိုင်းတွေမှာအကောင်းဆုံး အစားအသောက်တွေ ရေအိမ်တွေ ရှိစေချင်ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ လစ်ရင်လစ်သလို ရသလောက်လေး ပိုယူလာဖို့ ခိုးလာဖို့လဲ ၀န်မလေးဘူး။
ကဲ..ဒီတော့ ပျက်စီးပုပ်သိုးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီစနစ်ကြီး အဖွဲ့အစည်းအတွက်
ဘယ်သူတွေက ပြောင်းလဲဖို့လိုနေတာလဲ…အဲဒီစနစ်ကြီးမှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်လှုပ်ရှား
လည်ပတ်နေတာလဲ။ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ပတ် ဝန်းကျင် ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်း တခြား
ဒါပေမဲ့ သေချာပါတယ်..တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျကျ ပါဝင်ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ရမယ့်
ကိုယ့်မိသားစုလေးနဲ့ အတူတူ စိတ်ချလုံခြုံတဲ့အိမ်လေးထဲ
အတူတူထိုင်နေကြပြီး ပြတင်းပေါက်ကနေ ခပ်လှမ်းလှမ်းပဲ စောင့်ကြည့်နေကြမှာပါ။
သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ မောင်သန့်ရှင်းကြီးတစ်ယောက် မိုးပေါ်ကနေကျလာပြီး
အာလုံးကို နေရာတကျ ပြန်ဖြစ်သွားအောင် လှဲကျင်းရှင်းလင်း ပြောင်းလဲပေးသွားလိမ့်မယ်လို့
ဒါမှမဟုတ်လဲ တတ်နိုင်သူတွေက တခြားတိုင်းတပါးကို ပြောင်းရွှေ့သွားရင်လဲ သွားလိမ့်မယ်…. ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အမဲလိုက်ခွေးကြီးလက်ကနေ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြေးတဲ့
အဲ့လိုနေရင်းနဲ့မှာ နယူးယောက်က မလုံခြုံဘူးလို့ ခံစားလာရရင် အင်္ဂလန်ကိုဆက်ပြေးကြ အင်္ဂလန်မှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလာရင် ပင်လယ်ကွေ့ကို လေယာဉ်နဲ့ပြေး… ပင်လယ်ကွေ့မှာ စစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ လူမှုကယ်တင်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ အိန္ဒိယကိုပြန်ပို့ပေးဖို့ တောင်းဆိုကြ။
J F Kennedy က
သူ့နောက်လိုက်အမေရိကန်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ စကားလေးနဲ့ပဲ
“တိုင်းပြည်က သင့်ကို ဘာပေးနိုင်လဲလို့ မေးမယ့်အစား.. တိုင်းပြည်အတွက် သင်ဘာပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာပဲ မေးပါ” ….တဲ့……။ ” #
အိန်ဒိယ သမ်မတပွောသှားတဲ့ “မငျးရဲ့နိုငျငံအတှကျ အခြိနျ ၁၀ မိနဈလောကျ ပေးနိုငျမလား´´တဲ့
မွနျမာနိုငျငံက လူတှအေတှကျ လညျး
အခြိနျယူပွီး ဖတျစခေငျြတယျ။ အခြိနျ
ဒီစာကို ဖတျ ပွီးသှားရငျ သူငယျခငျြးတို့ရဲ့ စိတျထဲမှာ ကိုယျ့တိုငျးပွညျအတှကျ ငါတို့ဟာ တိုငျးပွညျရဲ့ အနာဂတျတှေ ဆိုတာ သဘောပေါကျလာလိမျ့မယျ။ တာဝနျ သိစိတျတှေ ဖွဈပျေါလာလိမျ့မယျ။
အိန်ဒိယသမ်မတပွောတဲ့ မိနျ့ခှနျးထဲက လကျရှိမွနျမာလူမြိုး အတျောမြားမြားရဲ့ စိတျဓါတျကို ထငျဟပျစတေဲ့ အကွောငျးလေးပါ။ သဘောတူတယျ သဘောကြ တယျ နှဈသကျတယျဆိုရငျ ကနျြတဲ့လူတှေ သိအောငျရှဲပေးစခေငျြပါတယျ။ အခုလို ပွောထားပါတယျ။
” မငျးရဲ့နိုငျငံအတှကျ အခြိနျ ၁၀ မိနဈရမလား..?
“တို့အိန်ဒိယအစိုးရက လုပျဆောငျမှုတှေ မထိရောကျဘူး မငျးပွောတယျ။ တို့နိုငျငံရဲ့ဥပဒတှေကေလဲ အိုဟောငျးပွီး ခတျေမမီတော့ဘူး။
မငျးပွောတယျ… မီးရထားဆိုတာ ဟာသတဈခုပဲ..အဲလိုငျးတှဆေို ကမ်ဘာမှာ
အဆိုးဆုံး…စာပို့စနဈမှာလဲ ဘယျတော့မှ ပို့တဲ့စာက မရောကျဘူး…တို့တိုငျးပွညျမှာ
အားလုံးက ခှေးစာကြှေးပဈရတော့မလောကျ ပကျြစီးစုတျပွတျမှုတှခေညျြးပဲ လို့
မငျးပွောတယျ… မငျးပွော… မငျးအဲ့ဒါတှခေညျြးပဲ ပါးစပျကနပွေောပွီး
ကတြော့…စငျကာပူကလမျးတှပေျေါ မငျးဆေးလိပျလှငျ့မပဈရဲဘူး..စတိုးဆိုငျမှာ မုနျ့မစားရဲဘူး..
ညနေ ၅ နာရီနဲ့ ၆ နာရီကွား အောခတျလမျးပျေါကားဖွတျမောငျးဖို့ ၅ ဒျေါလာ
မငျးပေးတယျ… အဲ့လိုစငျကာပူမှာ မငျးတဈခုခုမြားပွောလား..ပွောခဲ့လား…?
ဒူဘိုငျးမှာ ဥပုသျလမြိုး လူမွငျကှငျးမှာ မငျးအစားစားရဲလား…
မကာရျမှာ ခေါငျးမဆောငျးပဲ မငျးအပွငျထှကျရဲလား.. ၀ါရှငျတနျမှာ တဈနာရီ ၅၅ မိုငျထကျကြျောပွီး မငျးကားမောငျးရဲလား… မောငျးမိလို့ ရဲလာဖမျးရငျ
ငါ့ကိုဘာမှတျနလေဲ ငါဘာကောငျလဲ သိလား ငါဘယျသူ့သားလဲ သိလားလို့ ရဲကို
မငျးပွောရဲလား…. အျောဇီနဲ့ နယူးဇီလနျကမျးခွတှေမှော စားပွီးသား
အုနျးခှံတှကေို တှကေ့ရာ မငျးလြှောကျပဈရဲလား….
သူမြားတိုငျးပွညျမှာ သူ့စညျးကမျးနဲ့အညီ အတိအကလြေးစားလိုကျနာနိုငျပွီး ကိုယျ့နိုငျငံပွနျရောကျမှ စညျးကမျးကို မလေးစား စညျးကမျးပကျြတတျတဲီ့မငျးကိုပဲ မေးနတော။
အိန်ဒိယမွကေို စနငျးပွီဆိုတာနဲ့စိတျထငျသလို ဆေးလိပျတှေ စက်ကူစတှေ အမှိုကျလြှောကျဖှတတျတဲ့
ရပျနိုငျငံမှာကတြော့ ဘာလို့ ပုံစံအတူတူ မလုပျနိုငျရတာလ?
အငျတာဗြူးတဈခုမှာ အငွိမျးစား ဘုံဘမွေို့စညျပငျအရေးပိုငျကွီး Mr.Tinaikar ဘာပွောသှားလဲ သိလား?လူ့မလိုငျတှကေ သူတို့ခှေးတှနေဲ့လမျးလြှောကျထှကျပွီး
ပွီးတာ့ အဲ့လူတှကေပဲတဈခါပွနျပွီး ညဈပနေတေဲ့ လူသှားလမျးတှအေတှကျ တာဝနျရှိသူ အဖှဲ့အစညျးတှညေံ့ဖငျြးလှခညျြရဲ့ဆိုပွီး အပွဈတငျတတျကွတယျ… တာဝနျရှိသူတှကေို
သူတို့ခှေးတှနေောကျကနေ တံမွကျစညျးတဈခြောငျးကိုငျပွီး ခှေးစှနျ့ခဲ့သမြှ အညဈအပတျတှကေိုကောကျကောကျလိုကျရှငျးပေးစခေငျြတာလား။
အမရေိကားမှာ ကိုယျ့အိမျမှေးတိရစ်ဆာနျဆီက ထှကျတဲ့ အညဈအကွေးတှသေနျ့စငျပေးဖို့ ပိုငျရှငျကတာဝနျယူရတယျ..ဂပြနျမှာလဲဒီလိုပဲဒီ အိန်ဒိယကလူတှေ
အဲ့လိုလုပျလား..? တို့လူတှကေကတြော့ မဲပေးပှဲသှား။ မဲလေးပေးပွီး..ဖွဈသမြှ
အကုနျကို တာဝနျလှဲခြ ခေါငျးခံပေးဖို့ လူတဈယောကျရှေးလိုကျသလိုပဲ။
မရှိသလိုနပွေီး အရာအားလုံးကို အစိုးရကပဲ ကကွီးခခှေးကအစ လိုကျဖွရှေငျးပေးဖို့
ကိုယျတိုငျပါဝငျအားဖွညျ့မှု သုည…. အမျှိုကျလေးတှေ
ကွုံသလိုလြှောကျပဈရငျး မွို့တျောသာယာလှပဖို့ အာဏာပိုငျတှကေို
ထိုငျစောငျ့နကွေတယျ။ အဲဒီ့အစား အမွငျမတျောတဲ့ စက်ကူတဈစကို
ကကြနြန ဘယျလိုသုံးရမလဲတော့ အလေးမထားဘူး။
အိန်ဒိယအဲလိုငျးတှမှောအကောငျးဆုံး အစားအသောကျတှေ ရအေိမျတှေ ရှိစခေငျြကွတယျ။
ဒါပမေဲ့ လဈရငျလဈသလို ရသလောကျလေး ပိုယူလာဖို့ ခိုးလာဖို့လဲ ၀နျမလေးဘူး။
ကဲ..ဒီတော့ ပကျြစီးပုပျသိုးနပေါတယျဆိုတဲ့ ဒီစနဈကွီး အဖှဲ့အစညျးအတှကျ
ဘယျသူတှကေ ပွောငျးလဲဖို့လိုနတောလဲ…အဲဒီစနဈကွီးမှာ ဘယျသူတှေ ပါဝငျလှုပျရှား
လညျပတျနတောလဲ။ကိုယျ့အိမျကိုယျ့ပတျ ဝနျးကငျြ ကိုယျ့မွို့ ကိုယျ့အဖှဲ့အစညျး တခွား
ဒါပမေဲ့ သခြောပါတယျ..တကယျတမျးလကျတှကေ့ကြ ပါဝငျပွောငျးလဲလုပျဆောငျရမယျ့
ကိုယျ့မိသားစုလေးနဲ့ အတူတူ စိတျခလြုံခွုံတဲ့အိမျလေးထဲ
အတူတူထိုငျနကွေပွီး ပွတငျးပေါကျကနေ ခပျလှမျးလှမျးပဲ စောငျ့ကွညျ့နကွေမှာပါ။
သူတို့စိတျထဲမှာတော့ မောငျသနျ့ရှငျးကွီးတဈယောကျ မိုးပျေါကနကေလြာပွီး
အာလုံးကို နရောတကြ ပွနျဖွဈသှားအောငျ လှဲကငျြးရှငျးလငျး ပွောငျးလဲပေးသှားလိမျ့မယျလို့
ဒါမှမဟုတျလဲ တတျနိုငျသူတှကေ တခွားတိုငျးတပါးကို ပွောငျးရှသှေ့ားရငျလဲ သှားလိမျ့မယျ…. ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အမဲလိုကျခှေးကွီးလကျကနေ ကိုယျလှတျရုနျးပွေးတဲ့
သူတို့စိတျထဲမှာ ကွီးကယျြခမျးနားတယျလို့ထငျရတဲ့အမရေိကားရဲ့ ဂုဏျသရတေျောအောကျမှာ နပေူစာလှုံခှငျ့တောငျးခံကွပွီး အမရေိကားရဲ့ လူနမှေုစနဈတှကေို တဖှဖှခြီးမှမျးခနျး ဖှငျ့နကွေလိမျ့မယျ။
အဲ့လိုနရေငျးနဲ့မှာ နယူးယောကျက မလုံခွုံဘူးလို့ ခံစားလာရရငျ အင်ျဂလနျကိုဆကျပွေးကွ အင်ျဂလနျမှာ အလုပျအကိုငျရှားပါးလာရငျ ပငျလယျကှကေို့ လယောဉျနဲ့ပွေး… ပငျလယျကှမှေ့ာ စဈဖွဈလာတဲ့အခါကတြော့ လူမှုကယျတငျရေးအစီအစဉျနဲ့ အိန်ဒိယကိုပွနျပို့ပေးဖို့ တောငျးဆိုကွ။
ကိုယျ့နိုငျငံရဲ့ စနဈ ခတျေကို အားပွညျ့တိုးတကျလာဖို့တော့ ဘယျသူမှ အပငျပနျးခံပွီး မစဉျးစားခငျြကွဘူး။
သူ့နောကျလိုကျအမရေိကနျတှကေို တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ စကားလေးနဲ့ပဲ
“တိုငျးပွညျက သငျ့ကို ဘာပေးနိုငျလဲလို့ မေးမယျ့အစား.. တိုငျးပွညျအတှကျ သငျဘာပေးနိုငျမလဲ ဆိုတာပဲ မေးပါ” ….တဲ့……။ ” #
Next story ဗိုလ်ချုပ်ကို ကျည်ဆံ(၁၃)ချက်မှန်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး
Previous story တန်ဖိုးရှိသော စာ